Induduzo - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Tropical Holidays
* Ukubukwa okumangazayo kweDunk Island
* Hamba ngezinyawo ukuze uqashe izikebhe, ama-kayak kanye nama-jet skis
* Hamba ogwini lolwandle uye eSurf Club
* Letha isikebhe!
Lesi sakhiwo esihle, esisanda kulungiswa sisesimweni esihle sayo yonke into ehlinzekwa yiSouth Mission Beach. Ngenkathi ungekho izinsuku zakho uziphumulele emphemeni, ube ne-bbq ngasechibini ngenkathi uthatha ukubukwa okumangalisayo kwe-Dunk ne-Bedarra Islands. Noma, uma uneholide elimatasa engqondweni, isitolo sendawo sendawo yokuqasha ezemidlalo kanye nemishini yokudoba singaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo.
Isitolo sendawo esinekhefi / i-take away sihamba ibangana nje, njengama-swings namanetha ahlabayo (Nov-May), futhi kuwuhambo lwemizuzu eyi-10 nje ogwini lolwandle ukuze uthole isidlo sakusihlwa eSurf Club. Njengoba kunezindawo ezimbili zokuphambana kwezikebhe zasendaweni ozothi 'uzifake', okuwukuphela kwento oyidingayo ukuthi unqume ukuya olwandle noma ngesikebhe somfula - awukwazanga ngempela ukukhetha indawo engcono!
ISouth Mission Beach iwuhambo lwemizuzu emi-5 ukuya enxanxatheleni yezitolo yasendaweni, okuhlanganisa neWoolworths kanye nekhemisi. Eminye imizuzu emi-5 izokuyisa e-Mission Beach Village lapho kubanjelwe khona izimakethe zasendaweni futhi ehlinzeka ngezinhlobonhlobo zokuthenga nezindawo zokudlela.
Le yindawo efanelekile yokuphumula, ukuphumula futhi ujabulele indlela yokuphila yasebhishi eshisayo..
Ibungazwe ngu-Tropical Holidays